Kolontsaina sy tantara momba ny orinasa - Quanzhou Jinjia Machinery Co., Ltd.
Mihetsiketsika mialoha ny fifaninanana ny onja-drivotra
Orinasa madinidinika sy salantsalany, miady amin'ny onja, ny olona Hongda dia manana fomba fiasa pragmatika, hazakazaka mahery vaika, mandalo ny fahendrena Quanzhou taloha amin'ny toetra amam-talenta tsara ho an'ny teknolojia marani-tsaina, fandikana indray ny "Tsy misy fandresena" avy amin'ny Fanahy.
Manoloana ny fanamby vaovao sy ny dia vaovao, miaraka amin'ny fanahin'ny fanavaozana sy ny asa mafy, dia hiainga ho amin'ny fandresena eo amin'ny tsenan'ireo ampahan-tsarety ho an'ny milina fananganana isika ary handroso amin-kerim-po.
Profesora Harvard Business School miresaka, taloha raha hijery ny zava-bitan'ny orinasa vao mahita ny boky, ary ankehitriny ny kolontsain'ny orinasa sy ny firaisan'ny kolontsain'ny orinasa, izay lakilen'ny orinasa amin'ny fampandrosoana maharitra. Ny fampandrosoana ny orinasa, ny kolotsaina orinasa dia takiana ilaina amin'ny dingana iray, ny fifaninanana orinasa maoderina dia iray amin'ny fifaninanana, saingy miantehitra amin'ny kolontsaina ny olona hampivondrona, da da orinasa naorina manodidina ny kolontsaina voadio, hampiroborobo ny fanahy Hongda, mamorona orinasa mirindra tsara tontolo iainana ao anatin'ny orinasa amin'ny famoronana asa tsara, mandroso, miasa mafy ary ny rivotra iainana, miankina amin'ny azy ireo, hanao ny asany.
Fanahin'ny orinasa: finoana tsara. * Fanavaozana fahalalana natokana
Filozofia momba ny asa: mpanjifa, tsena
Hevitra marketing: mamorona fitakiana sy manompo ny fiaraha-monina
Nahita ny Quanzhou Minzheng Transport Machining Plant
Nahita ny Quanzhou Hongda Machinery Co., Ltd.
Ny vokatry ny orinasa dia niditra tao amin'ny tsenan'ny milina enti-miasa eto an-toerana
Ny vokatra avy amin'ny orinasa dia niditra tao amin'ny tsenan'i Machinine injeniera atsimo atsinanana
Ny vokatra avy amin'ny orinasa dia niditra tao amin'ny tsenan'i Masinine momba ny injeniera
Mahazo ny lohatenin'ny orinasa fanamafisana
nanokatra orinasa fanampiny Fujian Jia Machinery Co., Ltd. ny orinasa
Orinasa mpivarotra Quanzhou Jinjia Machinery Co., Ltd.
Nahita Lianhe Heavy Industry Co., Ltd.